everest bank limited(everest bank limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
एभरेष्ट बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको रु. २ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज माघ १७ गते अन्तिम दिन रहेको छ। गत माघ ३ गतेबाट बैंकले १ हजार अंकित दरका कुल २० लाख इकाइ भएको ‘एभरेष्ट बैंक डिबेन्चर’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ। यो ऋणपत्रमा आज बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिने धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको...
एभरेष्ट बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद लम्बियो, अब कहिलेसम्म भर्न पाइन्छ ?
काठमाण्डौ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको रु. २ अर्बको ऋणपत्रमा आवेदन दिने म्याद लम्बिएको छ। गत माघ ३ गतेबाट बैंकले १ हजार अंकित दरका कुल २० लाख इकाइ भएको ‘एभरेष्ट बैंक डिबेन्चर’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ। यो ऋणपत्रको निष्कासन बन्द छिटोमा आज माघ ६ गते बैंकिङ समयपछि हुने भनिएको थियो। तर मागबमोजिम आवेदन नपरेका कारण अब यो ऋणपत्रमा माघ १७...
काठमाण्डौ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको रु. २ अर्बको ऋणपत्रमा आज माघ ३ गतेबाट आवेदन खुला गरिएको छ। बैंकले १ हजार अंकित दरका कुल २० लाख इकाइ भएको ‘एभरेष्ट बैंक डिबेन्चर’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गरेको हो। कुल इकाइमध्ये बैंकले १२ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट बिक्री गर्नेछ। बाँकी ८ लाख इकाइ भने सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिएको छ। आठवर्षे...
एभरेष्ट बैंकको रु. २ अर्बको ऋणपत्रमा माघ ३ बाट आवेदन खुल्ने, ब्याज कति पाइन्छ ?
काठमाण्डौ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले रु. २ अर्बको ऋणपत्रमा आउँदो माघ ३ गते निष्कासन गर्ने भएको छ। बैंकले १ हजार अंकित दरका कुल २० लाख इकाइ भएको ‘एभरेष्ट बैंक डिबेन्चर’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गर्नेछ। कुल इकाइमध्ये बैंकले १२ लाख इकाइ व्यक्तिगत तबरबाट बिक्री गर्नेछ। बाँकी ८ लाख इकाइ भने सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिनेछ। आठवर्षे अवधिको...
काठमाण्डौ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले रु. २ अर्बको ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति पाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले एभरेष्ट बैंकलाई गत मंसिर २० गते ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति दिएको हो। बोर्डको अनुमतिसँगै अब बैंकले १ हजार अंकित दरका कुल २० लाख इकाइ भएको ‘एभरेष्ट बैंक डिबेन्चर’ नामक ऋणपत्र निष्कासन गर्नेछ। कुल इकाइमध्ये बैंकले १२ लाख इकाइ...
काठमाण्डौ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले आफ्नो २७ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो पुस १ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको लाजिम्पाटस्थित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा जुममार्फत हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कुल १०.३२ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन...
एभरेष्ट बैंकको लाभांश घोषणा
काठमाण्डौ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको सञ्चित मुनाफाबाट सेयरधनीहरुका लागि हाल कायम चुक्तापुँजी ८ अर्ब ८९ करोड ३७ लाख १७ हजार १७८ रुपैयाँको कुल १०.३२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लाभांशमा ६ प्रतिशत बोनस...
काठमाण्डौ । सेयर बजारको ब्लुचिप स्क्रिप्टमध्येको एक नवील बैंक लिमीटेड र विदेशी लगानी समेत रहेको एभरेष्ट बैंक लिमीटेडले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ‘सरप्राइज लाभांश’ घोषणाको पूर्व तयारी गरिरहेका छन् । यी दुवै बैंकले राम्रो लाभांश घोषणा गर्ने योजनाका साथ आवश्यक प्रक्रियाहरुलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका छन् । दुवै बैंकको गत आर्थिक...
काठमाण्डौ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको नेतृत्व आज शुक्रबारबाट सुदेश खालिङ गर्ने भएका छन्। बैंक सञ्चालक समितिले खालिङलाई ६ महिनाअघि नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त गरेको थियो। तर कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाका कारण रोकिएको थियो। एभरेष्ट बैंकमा आउनुअघि खालिङ सिटिजन्स बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य थिए। सोही कारण उनलाई ६ महिनाको...
एभरेष्ट बैंकको नाफा नाफा रु. १.८२ अर्ब, रिजर्भमा १३%को बढोत्तरी
काठमाण्डौ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बढी नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा २७.३४ प्रतिशतले घटी हो। अघिल्लो वर्ष बैंकले २ अर्ब ५१ करोड नाफा आर्जन गरेको थियो। समीक्षा अवधिसम्म बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा २...
दुई वाणिज्य बैंकले रु. ५.५ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने, धितोपत्र बोर्डसँग मागे अनुमति
काठमाण्डौ । दुई वाणिज्य बैंकले कुल साढे ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएका छन्। एभरेष्ट बैंक र एनएमबि बैंक लिमिटेड ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएका हुन्। यी दुवै बैंकले ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड आवेदन दिएका छन्। एभरेष्ट बैंकले ‘८.५ प्रतिशत एभरेष्ट बैंक डिबेन्चर’ नामक २ अर्ब रुपैयाँबराबरको...
एभरेष्ट बैंकले रु. २ अर्बको ऋणपत्र जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल
काठमाण्डौ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले २ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ। बैंकले ‘एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ऋणपत्र, २०८६’ निष्कासन गर्ने भएको हो। बैंक १ हजार रुपैयाँ अंकित दरका कुल २० इकाइ भएको ऋणपत्र निष्कासन गर्नेछ। यो ऋणपत्रको अवधि ८ वर्षको हुनेछ। लगानीकर्ताहरुले यस ऋणपत्रबाट वार्षिक ८.५ प्रतिशत ब्याज पा�...
‘एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ऋणपत्र–२०७८’ को रकम फिर्ता लिन आउन लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह
काठमाण्डौ । एभरेष्ट बैंकले अवधि समाप्त हुन लागेको रु. ६० करोड रुपैयाँ ऋणपत्रको रकम फिर्ता लिन आउन ऋणपत्रधनीहरुलाई आग्रह गरेको छ। बैंकले एक सूचना जारी गरी २०७२ असार ३१ गरे जारी गरिएको ‘८ प्रतिशत एभरेष्ट बैंक लिमिटेड ऋणपत्र–२०७८’ को अवधि यही असार ३१ गते समाप्त हुने हुँदा ऋणपत्रधनीहरुलाई रकम फिर्ता लिन आउन आग्रह गरेको छ। �...
काठमाण्डौ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले शुक्रबार विराटनगरस्थित नागरिक केयर सेन्टरलाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। कोभिड १९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण एवं स्वास्थ्योपचारमा सहजीकरण गर्दै आएको नागरिक केयर सेन्टरलाई एभरेष्ट बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअनुरुप उक्त रकम सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराएको जानकारी...